I-SPY154 - i-OMG Wifi HD Endoscope Emanzi, i-5m - Izixazululo ze-OMG
I-SPY154 - i-OMG Wifi HD Endoscope Emanzi, i-5m
IDizayinelwe I-IP67 8mm yokuhlola ividiyo yekhamera, kulula ukuhlola izindawo okunzima ukufinyelela kuzo noma okunzima ukuzibona ezifana nepayipi elingaphansi kwamanzi, injini yemoto, ipayipi lokukhipha umoya, imoto nemishini, umhlangano wezingxenye ezincane, imishini yokuthola, njll.
IBHODI UKUQHUBEKA - Sekela wonke amafoni we-Android nama-iPhones, ibuye isekele amadivayisi ama-2 noma ngaphezulu axhuma ngasikhathi sinye.
KULULA UKUHLELA - Xhuma ngqo nge-smart phone, ithebhulethi noma i-PC nge-WiFi, alukho ucingo noma ikhebula elidingekayo, elilula ukulisebenzisa.
UKUKHANYA KOKUGUQUKA - Ukukhanya okushintshiwe okwakhelwe ngaphakathi okungu-8 kusiza ukuthuthukisa ukugqama kwesithombe nokucaca noma ngabe kusezindaweni ezimnyama noma ezinokukhanya okuncane, futhi ukhethe ubukhulu bokukhanya okuncike kuwe.
Ububanzi be-Lens: 8.0mm
Ukulungiswa: HD 640 * 480, 1280 * 720 (kuphela isithombe)
Usayizi wesayizi: I-1 / 5 intshi
Buka i-Angle: 70 Degree
Ibanga eligxile: I-4-6cm (engcono kakhulu)
Ukukalwa kwe fulemu: 30fps
I-LED: I-6pcs Izibani ze-LED, ukukhanya okulungiswayo
Izinga elingenanzi: IP67
Transmission Ibanga: I-5-30m
Ukushisa okusebenzayo: 0 ~ 70 centigrade
Ifomethi yefomethi: I-MJPEG
Ifomethi yevidiyo: AVI
I-WiFi Module Power Supply: I-850mAh Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi (ukusebenza ama-2 hrs)
System Support: IOS / Android / Windows
I-1. Ukubheka okuhamba phambili phakathi kwe-lens nenjongo kuwu-4-6cm.
2. Kujwayelekile ukuthi ikhamera ishise ikakhulukazi uma i-LED ikhanya kakhulu, ngeke ikwenze ukusetshenziswa noma isikhathi sempilo se-Endoscope.
3. Uma ungayibeki i-Endoscope endaweni eyomile, ingahle ibe nomswakama kukhamera futhi ithinte isithombe, kepha uma uvula i-LED yekhamera imizuzu embalwa ngaphambi kokuyisebenzisa, ukushisa kuzosusa umswakama.
I-4. Uma uthola isikrini somakhalekhukhwini wakho sibe mnyama futhi kukhona uphawu olubomvu esikrinini, vala i-endoscope ye-wifi bese uyivula futhi uxhumeke ku-endoscope wifi, ingasebenza kahle futhi.
Ukubuka okuphelele kwe-6275 Ukubuka kwe-1 Namuhla